किन आएनन् रंगशालामा दर्शक ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
किन आएनन् रंगशालामा दर्शक ?
हालै काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा साग खेलकुद प्रतियोगिता सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको छ । भूकम्पपश्चात् भत्किएको संरचना यही ठुलो प्रतियोगिताको लागी पुनर्निर्माण भएको हो । करिब अठार हजार दर्शक अट्ने गरी रङ्गशालाको प्याराफिट तयार पारिएको छ र यही रङ्गशालामा करिब चार वर्षपछि सहिद स्मारक राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगिता पनि सञ्चालन भइरहेको छ ।
तर सबैको मुखमा एउटै प्रश्न छ यतिका वर्षपछि फुटबल त फर्कियो तर दर्शक किन फर्किएनन् ? फुटबल विकासको लागी राष्ट्रिय लिग तथा अन्य ठुला प्रतियोगिताहरू सञ्चालन हुनु एकदम आवश्यक छ । चार वर्षसम्म पनि राष्ट्रिय लिग सञ्चालन नहुँदा पनि नेपालले यस पटकको साग खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै स्वर्ण पदक हात पार्न सफल भएको छ । तर पनि फुटबलको यति ठुलो क्रेज भएको देशको एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा लिगको चौथो चरणको खेल हुँदा पनि दर्शकको सङ्ख्या एकदमै कम रहेको छ । सात आठ सयको हाराहारीमा मात्र दर्शकहरू फुटबल हेर्न पुगेका छन् । के दर्शकको फुटबल प्रतिको मोह हराएको हो त ? पक्कै पनि हैन । केही दिन अगाडी मात्र एन्फाले दर्शकहरूलाई आकर्षित गराउँदै विभिन्न पुरस्कारहरूको पनि व्यवस्था गरेको घोषणा गरेको छ तैपनि दर्शकको उपस्थिति नगन्य । किन आएनन् त दर्शन रङ्गशालामा ? मेरो विचारमा दर्शक रङ्गशाला नआउनुको यी विभिन्न कारणहरू रहेका छन्-
१. प्रमुख कारणमा एन्फाः एन्फाले नै फुटबल प्रतियोगितालाई व्यवस्थित र दर्शकमय बनाउनका लागी ध्यान दिनु भन्दा कसरी हुन्छ प्रतियोगिता सञ्चालन गरेर हामीले गर्‍यौ भन्ने जस मात्र लिन खोज्नु ।
२. टिकट दर महंगोः चालु लिगमा एन्फाले बिक्रीको लागी राखेको टिकट दर महँगो हुनु हो । दुई सय र पाँच सय दरको टिकट फुटबलको पारखीहरूको लागी महँगो नै भएको हो । रित्तो रङ्गशालामा खेल सञ्चालन गराउनु भन्दा टिकट दर सस्तो गरेर दर्शकको चाप बढाउन सकिन्छ तर एन्फाले यतापट्टि कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन । ‘एनिहाउ पैसा कमाऊ’ भनेर मात्र हुँदैन ।
३.पुरस्कारको घोषणा नै गलत : पुरस्कारको लोभमा मात्र दर्शक खेल हेर्न जादैनन् । पुरस्कार भन्दा कसरी दर्शक आकर्षित हुन्छन् त्यतातिर ध्यान दिएको देखिँदैन ।
४. खेल तालिका मिलेन : हरेक दिन बाह्र बजे र तिन बजे खेल राखेर एन्फाले जसरी हुन्छ प्रतियोगिता चाँडो सक्नेतिर मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ । दिउँसोको समयमा दर्शकहरूले चाहेर पनि आफ्नो मन परेको टिमको खेल हेर्न जान सकेका छैनन् । कामकाजी दर्शक, स्कुल/कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी दर्शकहरू मध्यान्हमा कसरी खेल हेर्न जान सक्छन् ?
५. अन्तर्राष्ट्रिय चलनको अनुसरण भएन : विभिन्न च्यानलहरूमा युरोपेली लिग हेर्ने दर्शक छन् नेपालमा । उनीहरूको चाहना पनि त्यही फर्म्याटमा नेपालमा पनि खेल सञ्चालन भए हुन्थ्यो भन्ने रहेको छ । प्रतियोगितालाई बेलुकाको समयमा सञ्चालन गर्ने हो भने कामबाट छुट्टी भएपछि दर्शकहरू आफ्नो टिमको समर्थन गर्न अवश्य रङ्गशाला जाने थिए तर राति पनि खेल सञ्चालन गर्न योग्य रङ्गशाला पनि लिगका कुनै पनि खेल बेलुकाको तालिकामा परेको छैन ।
६. सुरक्षाको नाममा सास्ती : सागको दौरानमा प्रहरीले दर्शकलाई लाटी बर्साएको समाचार भाइरल भएको थियो । यस अगाडीका लिगमा पनि सुरक्षाको नाममा पानीको बोतल समेत लैजान नदिने, साँचो तथा सिक्का पैसा समेत लैजान नदिने गरेर दर्शकलाई निरुत्साहित पारिने कामहरू भएका छन् । प्याराफिटमा पानी तथा खाजा बेच्न दिने तर बाहिरबाट लैजान नदिने कार्यले पनि दर्शक भड्किएका हुन भनेर एन्फाले बुझ्न नै चाहेको देखिँदैन ।
७. गतिलो लाइभ भएन : राष्ट्रिय लिग फुटबलको लागी कुनै पनि एउटा राम्रो टेलिभिजन च्यानलबाट उत्कृष्ट रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने काम भएको छैन । विदेशी च्यानलबाट युरोपियन लिग हेरेका दर्शकहरूलाई नेपाल टेलिभिजनले दिने लाइभले आकर्षित गर्न सकेको छैन ।
८. किन लगातार खेल ? प्रतियोगिताका खेलहरू किन चाडै सक्ने मनसायले प्रत्येक दिन सञ्चालन गरिन्छ । विदेशी लिगहरू प्राय सप्ताहान्तमा सञ्चालन हुन्छन् । बिदाको दिनमा दर्शकहरू निर्धक्क खेल हेर्न जान सक्छन् तर हाम्रो रङ्गशालामा किन सप्ताहान्तमा मात्र खेल सञ्चालन ? किन मध्य बाह्र बजेको समयमा लगातार खेल सञ्चालन गराएर लिगलाई जसरी हुन्छ छिटो सक्ने काम भइरहेको छ ?
राष्ट्रिय लिग फुटबललाई गौरवको रूपमा हेरिनु पर्छ । वार्षिक तालिकामा मात्र राखेर जसरी हुन्छ खेल गराउने ? दर्शक आए आउन् नआए नआउन् भनेर हुँदैन । खेलाडीको बारेमा सक्दो प्रचार प्रसार गरेर सप्ताहान्तमा मात्र खेल तालिका राखी टिकटको मूल्य कम गरेर दर्शकलाई आकर्षित गराउन एन्फाले अविलम्ब ध्यान दिनु जरुरी छ । दर्शकबीना खेल्न खेलाडीहरूलाई पनि त्यति मजा आउँदैन ।
– मनोरञ्जन मल्ल ठकुरी